सलमान खानको विश्लेषण | Samacharpatiसलमान खानको विश्लेषण – Samacharpati
सलमान खानको विश्लेषण
चलचित्र उद्योगका ‘दबंग खान’ मानिने सलमान खान २७ डिसेम्बरमा ५६ वर्षका भए । आइतबार सर्पले टोकेको खबर पाएपछि सलमान खान अचानक चर्चामा आए र केही घण्टा अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो । तर, पछि सलमान खानलाई टोकेको सर्प विषालु नभएको पत्ता लागेको थियो । पनवेलको फार्म हाउसमा रहेका बेला सलमानलाई सर्पले टोकेको थियो । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ ।
चर्चित लेखक सलिम खानका जेठा छोरा सलमान खानले आफ्नो ३० वर्षको फिल्मी करियरमा धेरै उतारचढाव देखेका छन् । बक्स अफिसको हिसाबले उनलाई सबैभन्दा शक्तिशाली खान मानिन्छ ।
सलमान खान रोमान्टिक नायक हुन् ?
सलमान खानले प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखाको सन् १९८८ मा आएको फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ मा सहायक पात्रको रुपमा फिल्म उद्योगमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला सुरज बडजात्या आफ्नो डेब्यु फिल्मका लागि कलाकारको खोजीमा थिए । अन्त्यमा उनले सलमान खानलाई कास्ट गरे । सन् १९८९ मा ‘मैने प्यार किया’ त्यो वर्षको सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बन्यो र उनी रातारात स्टार बने ।
सलमान खानलाई रोमान्टिक हिरोको दर्जा दिइएको थियो । यद्यपी उनीसँग एक वर्ष काम थिएन तर त्यसपछि उनका धेरै फिल्म आए जसमा उनको रोमान्टिक फिल्म हिट भए । जस्तै साजन, हम आपके है कौन, लभ, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, हम दिल दे चुके सनम, दुल्हन हम ले जायेंगे, बीवी नम्बर १ र हम साथ साथ हैं ।
औसाजा भन्छिन्, ‘सुरुमा सलमानको रोमान्टिक हिरोको छवि थियो र उनले त्यही भूमिका पाएका थिए ।’ मैने प्यार किया’ र ‘हम आपके है कौन’ यति धेरै हिट भए कि उनी रोमान्टिक हिरोको छविबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । त्यही क्रममा उनको एक्सन फिल्म बागी आयो तर चलेन ।
एक्शनमा सलमान खान सफल नायक हुन् ?
औसाजाका अनुसार सलमान खानले फिल्म बागीमा एक्सन विधामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरे तर उनी सफल भएनन् । तर, उनले आफ्नो करियरको पहिलो दुई दशकमा केही एक्सन फिल्म पनि गरे । जस्तै– करण अर्जुन, वीरगति र उपकरण । तर यसले उनको रोमान्टिक नायकको छवि परिवर्तन गरेन ।
सन् २००९ मा बोनी कपूरले प्रभुदेवाले निर्देशन गरेको साउथको फिल्म ‘पोकरी’को हिन्दी रिमेक ‘वान्टेड’ बनाएका थिए । त्यो समयमा बोनी कपूरको कुनै फिल्म चलिरहेको थिएन र सलमान पनि आफ्नो करियरको खराब चरणबाट गुज्रिरहेका थिए । यो फिल्म हिट भयो र यसले सलमान खानको एक्शन हिरोको छवि बनायो, त्यसपछि उनी धेरैजसो एक्शन फिल्ममा देखा परे र १०० करोड कमाउने फिल्मको हिस्सा बने ।
त्यसो त वान्टेडका बारेमा चलचित्र उद्योग विश्लेषक अतुल मोहन भन्छन्, “वान्टेड फिल्म ढिलो रिलिज भए पनि सिंगल स्क्रिन र मल्टिप्लेक्स दुवैमा धमाका भयो । यसअघि सबै ठूला स्टारका फिल्महरू दीपावलीमा मात्रै रिलिज हुने गर्दथे तर वान्टेडले इदलाई महत्त्वपूर्ण बनायो ।”
‘वान्टेड’ पछि सलमान खानका फिल्महरू इदमा रिलिज हुन थाले र हिट हुन थाले । जस्तै– बडीगार्ड, दबंग, किक, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान र सुल्तान ।
अतुल मोहनले फिल्म वान्टेडपछि सलमान खानले दर्शकले आफूबाट के चाहन्छन् भन्ने बुझेको बताउँछन् । वान्टेडअघि उनले वर्षमा तीन–चारवटा फिल्म गर्थे, जसमध्ये केही हिट र धेरै फ्लप थिए । उनले वान्टेड पछि लगातार हिटहरू फेला पारे र वर्षमा एक वा दुई फिल्म गर्न थाले ।
दर्शकसँग जोडिएर कसरी सुपरस्टार बने ?
फिल्म इन्डस्ट्रीमा सलमान खानका फ्यानलाई पागल फ्यानको दर्जा दिइएको छ । उद्योगको सबैभन्दा सुन्दर ताराहरू मध्ये एक मानिने, सलमान खानले विवाह गरेनन् र प्रायः महिला फ्यानहरूले जोखिम उठाउँछन् र सलमान खानप्रति आफ्नो जोश व्यक्त गर्छन् । यस्तो क्रेज फ्यान फलोइङको बारेमा औसाजा भन्छिन्, “सलमान खानले रोमान्स र एक्शन फिल्मको सुन्दर सन्तुलन कायम गरेका छन् । कुनै पनि स्टारले यी दुई विधालाई एकसाथ मिलाउन सकेका छैनन् तर सलमानले रोमान्स र एक्सन दुवैमा सुपरहिट फिल्म बनाएका छन् ।” उनका फ्यानहरूको संख्या पनि ठूलो छ । यिनै फ्यानहरूको कारणले नै उहाँलाई बक्स अफिस ह्यान्डल गर्ने शक्ति मिल्छ र त्यसैले उनका फिल्महरूले राम्रो कमाइ गर्छन् ।”
उनी भन्छन्, ‘सलमान खानलाई उत्कृष्ट अभिनेतामा गनिने छैन तर उनको स्टाइल र व्यवहार निकै अनौठो छ जसका कारण उनले पहिचान पाएका छन् र यही कारण उनको धेरै फ्यान फलोइङ छन् । उनको स्टाइल निकै फिल्मी छ । दबंगमा चश्मा लगाएर, नाडीमा निलो ब्रेसलेट लगाएर हिँड्ने शैली ।” फिल्म उद्योगमा एक्शन हिरोको सेल्फ लाइफ बढी रहेको र सलमान खानसँग एक्शनसँगै लभर ब्वाईको फरक किसिमको करिश्मा रहेको फिल्मको ट्रेन्डमा नजर राख्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जहाँ आमिर खानलाई बुद्धिमान सुपरस्टार र शाहरुख खानलाई विदेशी दर्शकको राजा मानिन्छ, सलमान खानले स्वदेशी दर्शकमा गहिरो छाप छोड्न सफल भएका छन्, त्यसैले उनलाई ’सामान्य जनताको नायक’ भनिन्छ।
औसाजाले सलमानको करियरको शुरुवातको एउटा घटना सुनाउँछिन्, ‘जब ‘हम आपके है कौन’ सुपरहिट भएको थियो, सलमानलाई सोधिएको थियो कि उनी फिल्म उद्योगको नयाँ सुपरस्टार हुन् ? एउटा सुपरस्टार र त्यो हो अमिताभ बच्चन । उहाँ आज पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ र यसले उहाँको नम्रता देखाउँछ ।”
सलमान खान ‘बिइङ ह्युमन’ नामक संस्था चलाउँछन्, जसमार्फत उनले धेरै गरिबलाई आर्थिक सहयोग गर्छन् । त्यसैले उनलाई चलचित्र क्षेत्रको ‘परोपकारी स्टार’ पनि भनिन्छ । यी सबै भन्दा साधारण मानिसहरू माझ उनको लोकप्रियता बढ्यो ।
सलमान खान र उनको विवाद
फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति प्रसिद्धि सलमान खानले पाएको छ, सायद अरु कुनै स्टारले पाएको छैन । तर यो प्रसिद्धिसँगै उनी धेरै विवादमा पनि फसेका छन् । उदाहरणका लागि, २००२ को हिट एन्ड रन मुद्दा, जसबाट उनी सन् २०१५ मा सफाइ पाएका थिए । कालो हरिण शिकारको मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको छ । २६÷११ को मुम्बई हमलाको बारेमा उनको बयानलाई लिएर पनि धेरै विवाद भएको थियो, जसमा उनले पाकिस्तानलाई दोष नदिने बताएका थिए । पछि उनले यसका लागि माफी पनि मागेका थिए । उनले सन् १९९३ को मुम्बई ब्लास्टका याकुब मेननलाई लिएर केही ट्वीट पनि गरेका थिए, जसमा विवाद भएको थियो । यसका लागि उनका बुबा सलीम खानले पनि उनलाई गाली गरेका थिए र पछि उनले ती ट्वीट डिलिट गरेका थिए ।
यसबाहेक ऐश्वर्या राईसँगको प्रेम सम्बन्ध र ब्रेकअप, विवेक ओबेरोय र सलमान खानबीचको झगडा, साथीसँगको झगडाले शाहरुख खानलाई प्रतिद्वन्द्वी बनायो । तर, अहिले दुवैले आफू असल साथी भएको बताएका छन् ।
तर, औसाजाले कुनै पनि स्टारको करियरमा विवादले असर नगर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “यस्तो भएको भए विवेक ओबेरोय आज सुपरस्टार हुने थिए । सलमानको जीवनमा केही दुर्घटनाहरू पनि भएका छन्, त्यसैले उनलाई धेरै प्रेस कभरेज मिलेको छ । तर यसले उनको फ्यान फलोइङ र बक्समा उनको कदमा कुनै असर गरेको छैन । कार्यालय ।”
५० को सलमान र बक्स अफिस
सन् २०१५ मा सलमान खान ५० वर्ष पुगे र सोही वर्ष उनको फिल्म बजरंगी भाइजानले ईदमा धेरै कमाइ गरेको थियो । प्रायः सलमान खानका समीक्षकहरूले पनि यो फिल्मलाई मन पराएका थिए र यो उनको उत्कृष्ट फिल्महरूमा गनिन्छ ।
अतुल मोहन भन्छन्, ‘बजरंगी भाइजान एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो, जसमा कुनै एक्शन थिएन । सलमान खानको क्यारेक्टर पाकिस्तान जाने हो भने गदर एक्शन जस्तै हुनेछ भन्ने अपेक्षा दर्शकले गरेका थिए तर फिल्ममा भने एक्सन भएन ।
यति हुँदाहुँदै पनि सलमान खानको बालिकासँगको केमेस्ट्रीले दर्शकलाई भावुक बनाएको थियो र यो फिल्मको प्रयोग सफल भयो ।
यसपछि सलमान खानले धेरै प्रयोग गरे । उदाहरणका लागि, ट्युबलाइट र भारत जस्ता चलचित्रहरू जुन दर्शकले अस्वीकार गरेका थिए । सलमान खानको एक्शन अवतार दबंग–३ र रेस–३ लाई पनि दर्शकले अस्वीकार गरेका थिए, यी फिल्मले १०० करोडभन्दा बढी कमाइ गरे पनि ।
योसँगै सलमान खानले फिल्म ट्युबलाइटमा काम नगरेकोमा फिल्म वितरकलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएका छन् ।
कसरी बने कादर खान कमेडियन ?
होस्टसहित हुनेछ ९४औं ओस्कर अवार्ड
मलाइकासँग दुरी बढाउँदै अर्जुन कपूर